Iyo Apple Watch ichiri yakakosha muhutano hwevanhu | Ndinobva mac
Iyo Apple Watch ichiri yakakosha muhutano hwevanhu
Mumashoko ekupedzisira eApple takaona kuti muvhidhiyo "yekusimudzira" kupfuura mumwe wedu akaisa moyo yedu muchibhakera uye ndeyekuti mifananidzo chaiyo yevanhu yakaonekwa. wachi yevaCupertino 'akangwara aive aponesa chaiko hupenyu hwavo.
Zvekare, nhau dzakanangana zvakananga neizvi zvehutano mabasa paApple Watch inotaura nezvenyaya iyo jaya-makore-makumi matatu jaya rakavhiyiwa moyo kune mamiriro Dai pasina iyo wachi ingadai yakaguma zvakashata zvakanyanya, sekureva kwevanachiremba pachavo vakaudza nhepfenyuro inozivikanwa yeChirungu, Zuva.
Apple inotora chipfuva chayo kunze kwekushandisa kweApple Watch uye nechikonzero chakanaka
Chiziviso kumagumo eECG yem protagonist yenyaya nyowani yehupenyu, Chris Mint, akamutora akananga kuchipatara kuti asiyane nezvakabuda. Vanachiremba mushure mekuona chiziviso pane Apple chishandiso havana kunyatso kuzvitenda uye ndokutumira kune akakodzera bvunzo. Mune ino kesi uye mushure meizvi vanachiremba vakasimbisa kuti kana isiri yeawa, Mint ingadai yakatambura chirwere kana chirwere chemwoyo.
Paakangoonekwa nenyanzvi, akavhiyiwa nechimbi-chimbi kuti agadzirise dambudziko nemoyo wake, izvo zvaisanganisira kuvhiyiwa moyo. Mumhanyi, mudiki uye pakutanga asina nhoroondo yemoyo iyo, kana isiri yeECG yakatorwa neApple Watch Series 4, anogona kunge achirwara nezvirwere zvikuru. Zvinonzwisisika tKuva neApple Watch hakuvimbise kuti matambudziko emoyo aya haazoonekwe kana kuti achagadziriswa zvakafanana mune zvese zviitiko, asi zvinobatsira kuzviona uye mushonga unogoneka muzviitiko zvakawanda, ndosaka chiri chinhu icho Apple iri kutora nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo Apple Watch ichiri yakakosha muhutano hwevanhu
Apple Card inogona kuwanikwa mune dzimwe nyika munguva pfupi